Niyadjab ka dib kansarka: "Toddobo sano ayay qaadatay si aan uga soo baxo tuubada" - TELES RELAY
ACCUEIL » CAAFIMAADKA CUSUB Niyad jabka ka dib kansarka: "Toddobo sanno ayaan ka qaatay tubbada"
Murugo ka dib kansarka: "Waxay igu qaadatay todoba sanno si aan uga soo baxo tuubada"
Janaayo 2002, wax walba waa ku fiican nolosha nolosha Christophe Gaborieau, 35 sano. Kusaabiyaha isboortiga wuxuu leeyahay shaqadiisa uu jecel yahay, qof dumar ah iyo laba caruur ah. Maalin maalmaha ka mid ah, markii uu ka soo laabanayo, wuxuu dareemayaa in xijaabtayda saxda ah ay laban laaban tahay. Bilowga soonka jahannamada gadaashiisa, sida uu sheegayo at Christophe Hondelatte Khamiistii.
Kansarka la ogaado. Christophe Gaborieau ayaa ka soo laabtay jimicsigiisii ​​todobaadlaha ah isla markaana markiiba ku qubeysto qubayska. Marka la eego dhuumaha biyaha, waa la yaabay, wuxuu ogaaday in xijaabtigiisii ​​midig laban laaban yahay. Wuxuu isla markiiba tagayaa dhakhtarka, oo caddeeyay inuu jiro dhibaato weyn. Christophe Gaborieau ayaa markaa kadib ballan ku sameynaaya xaalad deg deg ah oo lala yeesho aqoonyahanka nudaha. Xirfadlaha caafimaadka, Christophe Gaborieau waa in loo shaqeeyaa: Ka saarista xiniinyaha. Wuxuu dooranayaa. Hawlgalku ma aha mid khasab ah, laakiin laguma taliyo. Christophe wuu aqbalay, sidaa daraadeed 29 Jannaayo, wuxuu isu arkayaa qolka qalliinka.
Warbxinta xun waxay ku dhacdaa qalliinka kadib Christophe Gaborieau. Buro la ogaado waa kansar. Waa inaanu sameynaa shucaac daaweyn. "Waa kansar laga bilaabo da 'aad u yar, badanaa 25 / 35 sano," ayuu ku yiraa makarafoonka Europe 1. Jimicsiyada kiimiko ee 28 ayaa la qaban doonaa si looga takhaluso kansarka.
"Waxaan ku dhacay duufaan walaac ah". Laakiin Christophe, oo ku guuleysatay kansarka ka dib markii uu marathon caafimaadkiisa, dhibaatadu hadda waa meel kale: madaxiisa. Laga soo bilaabo kalfadhiyadii ugu horreeyay, Christophe Gaborieau wuxuu bilaabay inuu welwel weyn ku yeesho. Xaaladdiisa nafsiyadeed waa "wax laga xumaado", laga soo bilaabo xaqiiqda dhakhaatiirta. Nolosha Christophe ayaa markaa noqon doonta mid isku dheeli tiran inta u dhexeysa shaqada, joogista isbitaalka dhimirka, dhimirka nafta, ku soo noqoshada shaqada. "Waxaan ku dhacay duufaan walaac ah, oo ah xeelad," ayuu yiri maanta. Murugo, kadib kansar.
Sida ku jirta dhammaan noocyada, Christophe Gaborieau kama saari karo. Isagu wuu furfuran yahay, keligiis ayuu ku helaa, kirada, waa laga eryaa shaqadiisa intii uu xafiiska joogay tan iyo sannadkii 20 ee ganacsigiisa, wuxuu ku xiran yahay anxiolytics. "Waxay igu qaadatay todoba sanno si aan uga soo baxo tuubada," ayuu yidhi. Maxay hubaal ka dhigi doontaa madaxa iyada ka baxsan biyaha? Daroogo jahawareer ah, marka hore, ka dibna 24 bilo beer ah ee La Roche-sur-Yon, xarun caafimaad si dib loogu helo dhadhanka shaqada.
Shan iyo toban sano ka dib sheekadan, Christophe Gaborieau wuxuu ogyahay inuu wax badan lumay. "Laakiin waxaan sidoo kale ku helay hanti nololeed, waxaan ahay falsafad badan. Oo anigu waan dhawaaqi doonaa, waanan firdhin doonaa, waanan soo wada hadli doonaa.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.europe1.fr/societe/une-depression-apres-un-cancer-jai-mis-sept-ans-a-sortir-du-tube-3886343
Kansarrada iyo naasaha galmada: "Markaad haysato jirkaada, waxaad marwalba welweleysaa"
Agathe Auproux ayaa soo saartay kateetarkeeda: iyada oo la il daran kansarka, haweenaydan ayaa diiday inay bixiso ninkeedii (PHOTO)